Green Houses Mounting System (vahaolana voajanahary momba ny tontolo iainana) dia mampiasa tanteraka ny tanimboly sy mamboly angovo madio avy amin'ny masoandro ary mitondra hoavy madio kokoa ho an'ny olombelona.
Vahaolana fitaterana rano ho an'ny vovon-tsolika PV dia azo ampiasaina ho toy ny biraom-boafika mivantana ho an'ny fiara mandeha herinaratra izay mifandray tsara amin'ny kabinetra fiampangana.
Raha ampitahaina amin'ny carport nentim-paharazana, ny firafitry ny anatiny tsara indrindra amin'ny FOEN waterproofing carporting dia ahafahana mitarika, manangona sy mandefa ny ranonorana miaraka amin'ny rafi-drano misy rano, tonga amin'ny rano miaro ny rafitra ary miaro ny carport ao anatiny. Ho fanampin'izay, ny tadin'ny rano mifangaro tsy mikisaka dia azo ampidirina sy averina imbetsaka, ka izany no mampihena be ny enta-mavesatra eo amin'ny toerana.
Tile Roof Solar Mounting System dia novolavolaina manokana ho an'ny trano fametrahana ny trano amin'ny trano fonenana sy varotra.
3Sliding sy Casement mitambatra varavarankely
Ity mombamomba aluminium anodized ity dia ampiasaina betsaka ho an'ny varavarankely sy varavarana. Fitaovana tsara indrindra. Azonao atao ny manamboatra profil aluminium anodized amin'ny FOEN ambany ambany noho ny vidin'ny mpiara-miasa.
Ny vokatra extrusions aluminium eto amintsika dia amidy manerana an'izao tontolo izao. Fankatoavana azo antoka!
Ny varavarankely amin'ny alàlan'ny aluminium dia manatsara ny fahaizan'ny toetran'ny aluminium amin'ny alàlan'ny fantsakanana elektrostika, ny famafazana vovoka elektrika amin'ny fantsom-pahazavana alumina, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny fikolokoloana tsara, ny fampitomboana ny fanoherana aluminium, ny fanoherana ny fanoherana ary ny fanoherana asidra, ny fanoherana ny fanoherana ny toetrandro.
Coated na tinted glazing manana optical toetra izay mangarahara amin'ny angovo omen'ny sasany ary angovo taratra. Ny palitao mifantina somary maoderina dia mangarahara amin'ny hazavana hita maso ary maneho taratra ny taratra tsy mihetsika fohy sy onjam-peo lava be.
• Ny fanoherana feo Rw hatramin'ny 48 dB
• Ny rivotra sy ny fahitan-drivotra hatramin'ny 1000 Pa (arakaraka ny famolavolana)
• Ny famonoana hafanana avo (miankina amin'ny endrika)
• Ny haben'ny maizina mamirapiratra amin'ny 6 ka hatramin'ny 50 mm
• lanjan'ny vera ambony amin'ny 500 kg
• Jereo ny sakany 60 mm
• Ny fehin-kibo samihafa samy hafa any ivelany
• Ny loko anatiny sy ivelany toa izay tiana
Ny mombamomba ny Aluminum Anodized ho an'ny varavarankely
FOEN Group izao dia orinasa lehibe iray manontolo, manampahaizana manokana momba ny Fampandrosoana & Fampandrosoana, famokarana ary koa ny fivarotana ny mombamomba ny Aluminum, ny rafitra varavarankely, ny fanaovan-jiro ny masoandro, ny fananganana aluminium, ny fantsom-by vy ary ny fanaka rindrina fanakona.Mizara ny famokarana, nampahafantarinay ho 50 takelaka farafaharatsiny vita amin'ny CNC, ny fahafahantsika famokarana fanao isan-taona maherin'ny dimy ambin'ny folo arivo izay manamboatra endrika vaovao ho mora sy haingana kokoa.